ဒွိဟိတ် တိဟိတ် ခွဲခြားနည်းနှင့် ဒွိဟိတ် တိဟိတ် ဖြစ်ပုံ	Posted on January 1, 2010	by mettayate သေက္ဈတောင်ဆရာတော်၏ ပဏ္ဍိတဝေဒနီယကျမ်းမှာ –
ကောင်းမှုမပြုခင် ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုသိပြီး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ရှေးဦး ပုဗ္ဗစေတနာ၊ ကောင်းမှုပြုဆဲ၊ လှူဒါန်းဆဲအခါမှာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ မုဉ္စစေတနာ
အထမြောက်တဲ့ ကုသိုလ်ကံတွေကိုဖြစ်စေပြီး ယခုဘ၀ နောက်ဘ၀တွေမှာ အကျိုးပေးသွားမှာက မုဉ္စစေတနာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဗ္ဗစေတနာနှင့် အပရစေတနာတို့က မုဉ္စစေတနာကို ပိုအားကြီးအောင် ပံ့ပိုးပေးကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်းရင် ကုသိုလ်ကံတို့က အားကြီးပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အကျိုးပေးနိုင်ကြတယ်။ စေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်ကို ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ် (သို့) အမြတ်စားကုသိုလ် လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်း လောဘ၊ မစ္ဆရိယ၊ အတ္တစွဲတို့နဲ့ မကပ်ငြိဘဲ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စွန့်လွှတ်နိုင်တာ ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့
“ဣဒံမေပုညံ နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟောတိ” “ဤကျွန်ုပ်၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မျောက်ပြုရန် အကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း လို့ ရည်စူးပြီးလှူပါ။ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ။ နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပါ။”
အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါ ကံ-ကံ၏အကျိုးကို သိတဲ့ဉာဏ်မယှဉ်ဘဲ စေတနာသုံးတန်လည်းမပြဋ္ဌာန်းဘဲ ပြုလုပ်ရင် ဒွိဟိတ်သြမကကုသိုလ်ကံများဖြစ်တယ်။ အဟိတ်ဆိုသည်မှာ ဟိတ်မပါရှိဘူး လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← သုညအမြင်